Nissan Latio | Nissan | Mandalay Region
Nissan Latio - 177.00 Lakhs
Luxury ဇိမ်ခံSaloonကားလေးကို ဆီစားသက်သာ၊
ဈေးသက်သက်သာသာနဲ့ ရုပ်ထွက်အလန်းလေးစီးနိုင်ဖို့ Nissan Latio ကားရှယ်လေး တစ်စီးရောင်းပါမယ်ခင်ဗျာ။
Nissan Latio For Sale !
Model - 2012 (November)
Engine - 1200 Cc with Turbo / 2Wd
Pure Drive Auto Stop System
License - MDY / 5J - ****(2018/May)
Grade 4.5 B , Kilo 10208 Km (Cancellation
Kilo 32000 Km သာရှိသေးပြီး တစ်စီးလုံး
ကောင်းသေးတဲ့ တစ်လက်ကိုင်အိမ်စီးကားသန့်လေးကို 177သိန်း(ညှိနှိုင်း)ဈေးဖြင့် မန္တလေးမြို့တွင်
Phone - 09457777465
Mobile : 09457777465
ေရာင္းရန္: Nissan Wingroad 2011 full options ။ 57000 ကီလိုမီတာ။ နိုင္ငံျခားသားပိုင္။ မႏၲေလးမွတ္ပုံတင္၊ 6L/XXXX ကားသည္ MDY တြင္ရွိသည္။ ၂၂၉ သိန္း။ 09250294041 ကိုေခၚပါ For sale: Nissan Wingroad 2011 full options. Only 57000 kms. Foreigner owned. Mandal...